Pilina fananganana lahy - 50%
Home » Pilina fananganana lahy
Pilina fananganana lahy
Betsaka ny famenon-tsakafo ahitra eto an-tsena ankehitriny izay mampitombo ny fahombiazan’ny firaisana ara-nofo sy ny fahafaham-po. Ahoana ny fomba hisafidianana ny iray amin’ireo vokatra ireo no tokony hosedraina?
Ny fanandramana mandamina ireo famaritana isan-karazany dia mety handany fotoana sy hahakivy.
Noho izany, rehefa miditra amin’ny tontolon’ny fanafody famenon-javamaniry dia zava-dehibe ny fahalalana vaovao momba ny fitsaboana raokandro.
Rehefa mitady fanafody raokandro dia zava-dehibe ny fahitana iray izay milaza fa latsaka ao anatin’ny sokajy famenon-tsavony Se.
Ny Se dia midika fitrandrahana namboarina, midika hoe refesina tsara sy voarindra ireo akora ireo mba hahitana ny ampahany mitovy amin’ny fangaro.
Ny famenon-tsakafo sasany dia tsy manome an’io fomba tsy maintsy atao io; noho izany, tsy mitovy ny fatra, na dia amin’ny tavoahangy iray aza.
Mba hahazoana tanjona toa ny fanitarana ny filahiana, ny fitombon’ny isan’ny tsirinaina, na ny faniriana hanao firaisana ara-nofo mihombo, ny fampidirana fanafody suplier Se dia fanalahidy. Amin’ny zavatra hafa rehetra, ny vokatra dia hiovaova noho ny tsy fitovizan’ny dosie alaina isan’andro.
Rehefa miovaova ny dosie, ny valiny tsy miova dia sarotra kokoa, raha tsy azo atao kosa, ny manatratra azy.
Ohatra iray voalohany amin’ny famenon-tsakafo ahitra Se azo jerena amin’ny fikarohana fikarohana toy ny Vig-Rx.
Betsaka ny famenon-tsakafo Se herbal azo alaina ary ny fikarohana izay mety amin’ny filanao dia fikarohana fotsiny. Ny faka Maca dia nanjary famenon’ny firaisana ara-nofo.
Rehefa ampiarahina amin’ny asidra amine, ny fangaro dia hiteraka tsy firaisana ara-nofo mihamitombo, fa mampitombo ihany koa ny famokarana tsirinaina. Rehefa miantsena ny famenon-komana amin’ny alikaola dia mitadiava izay misy ireo akora roa lehibe ireo ary manandrama mitady iray izay manome vitamina ihany koa.
Ny fahazoana ireo akora mety avy amin’ny famenony izay mampiasa fomba fanao namboarina namboarina dia ho azo antoka fa mampiasa vokatra tsara ianao, mitarika amin’ny vokatra tsara indrindra.
Rehefa mikaroka momba ny famenon-tsakafo mety hampiasana, ny zavatra voalohany tadiavina dia raha toa ka famenon-tsavony Se ny famenon-tsakafo dinihina.
Raha tsy izany dia aza mandany fotoana na vola aminy.
Betsaka loatra ny vokatra hafa azo tsapain-tanana izay voaporofo fa miasa nefa tsy mandany vola amin’ny famenony izay vita amin’ny fenitra ambany kalitao.
pilina fanatsarana lahy, vokatra tsara indrindra ho an’ny lehilahy, olana amin’ny fananganana, famenonan’ny fananganana, fanatsarana ny fiara firaisana ara-nofo, kapsily ho an’ny lehilahy